नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा दिनरात भोक प्यास नभनि कोरोना संक्रमितको सेवामा खटिएका नर्सहरु, सम्मान स्वरूप शेयर गराैं – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा दिनरात भोक प्यास नभनि कोरोना संक्रमितको सेवामा खटिएका नर्सहरु, सम्मान स्वरूप शेयर गराैं
नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा दिनरात भोक प्यास नभनि कोरोना संक्रमितको सेवामा खटिएका नर्सहरु, सम्मान स्वरूप शेयर गराैं
admin May 1, 2021 May 1, 2021 जीवनशैली, समाचार, स्वास्थ्य	0
नेपालगन्जको भेरि अस्पतालको कोभिड वार्डमा खटिएका नर्सहरु । भोक, प्यास र निद्रा नभनि उनीहरु आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरि खटिएका छन् । कतिपय आफै संक्रमित छन् । तर पनि विरामीको उपचारमा होम्मिएका छन् । सलाम यी नर्सहरुलाई, जस्ले आफ्नो स्वास्थ्यकाे प्रवाह नगरि दिनरात कोरोना लागेकाहरूकाे जीवनरक्षाका निम्ति खटिरहे ।
यसरी दिनरात विरामीकाे सेवामा खटिइरहँदा कति नर्सहरूको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक समेत भएकाे छ भने कतिको प्रेसर घटबढ हुदा बेहाेस समेत भएकाे समाचार छ । यतिबेला ती बिचरी नर्सहरूकाे तस्विर समाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्दै गैरहेकाे छ । उनिहरूकाे अवस्था देख्दा नेपालीकाे मात्रै होइन जो कसैकाे मन नरूने भन्ने नै हुदैन।
तस्विर : सामाजिक सञ्जाल
**समाचारको पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
आजदेखि निषेधाज्ञामा थप यस्तो कडाइ गरिदै
यूरोप, जापान लगायत ५५ देशका नागरिक अब नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने!
यौ*न उ*त्तेजना बढाउने औषधि के–के हुन् : यसले कसरी काम गर्छ ?
घरमा एक्लै भएकाे बेला यी युवतीले बाथरूम’मा देखाएको चर्तिकला सामाजि’क संजालमा भाईरल!